သုံးပှငျ့ဆိုငျ အခဈြဇာတျလမျး …. – Shinyoon
သူ့ကို ကြှနျမ သိပျခဈြခဲ့သလို ကြှနျမကိုလဲ သူကြှနျမနဲ့ထပျတူ ခဈြနလေိမျ့မယျလို့ ထငျခဲ့မိတယျ ။ ဇာတျလမျးတှရေဲ့အစက သိပျကို ကွညျနူးဖို့ကောငျးခဲ့သလို အရမျးလဲ ပြျောခဲ့ရပါတယျ ။ သူနဲ့ကြှနျမ နောကျဆုံးထှကျသကျထိ အတူတူဆိုတဲ့ ကတိတှဟော သိပျကို ခြိုမွိနျခဲ့ဖူးတာ ။
ခဈြခဲ့ကွလို့မှ အခြိနျတှေ မကွာသေးခငျမှာပဲ အခြိုးတှေ ပွောငျးလာခဲ့တယျ ။ အခြိနျမှနျဆကျလရှေိ့တဲ့ဖုနျးတှဟော … အခြိနျလှနျသှားတဲ့အထိ ကိုယျ့ဆီ ၀ငျမလာခဲ့ဘူး ။ မီးစိမျးတိုငျး ကိုယျ့အတှကျ အမွဲဖွဈတတျခဲ့သူဟာ … Active Now ဖွဈပမေယျ့ ကိုယျ့ဆီ စာတဈကွောငျးမှ ရောကျမလာခဲ့ဘူး ။ ကိုယျတှေးနသေလို မဖွဈလောကျပါဘူးဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့သာ ကြှနျမကိုယျကြှနျမ နှဈသိမျ့ခဲ့တာပါ ။
ဒါပမေယျ့ … နောကျတဈယောကျတဲ့ ကြှနျမအပွငျ သူခဈြရတဲ့သူ နောကျတဈယောကျပေါ့ … ဒီအကွောငျးတှေ သသေခြောခြာသိခဲ့ရတဲ့ ညမှာတော့ ကြှနျမ သညျးသညျးထနျထနျရှာနတေဲ့ မိုးတှနေဲ့အပွိုငျ ကြှနျမ ငိုခဲ့ရတယျ ။ ဒီမကျြရညျတှကေ ဒီလောကျပါပဲ ဒီထကျပိုပွီး မငိုဖွဈတော့ဘူး ။
ကြှနျမ ရိုးတယျဆိုတာထကျ တျောတျောလေးကို အခဲ့တာပါ ။ ခဈြတယျဆိုရုံလေး ခဈြတတျခဲ့တာ သူ့ရဲ့ နောကျလူလို ခြိုအီနတေဲ့ စကားလုံးတှနေဲ့ မာယာတှေ မသုံးတတျခဲ့ဘူး ။ သူကလဲ ကိုယျ့ကို ခဈြတယျ ကိုယျကလဲ သူ့ကို ခဈြတယျဆိုရုံနဲ့ ကနြေပျခဲ့မိတာလေ ။
ဒီဇာတျလမျး … တဈခနျးတှေ မရပျခငျ ကြှနျမကိုယျတိုငျပဲ နရေဈခဲ့ပါတယျ ။ ကြှနျမဟာ ခနျြထားရဈခံမယျ့ မိနျးမတဈယောကျတော့ မဖွဈခငျြဘူးလေ။ ခဈြခဲ့တုနျးက ဖွူစငျခဲ့သလို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ခနျြလှပျလိုကျတဲ့ ဒီဇာတျလမျးမှာ ကြှနျမ အနညျးဆုံးတော့ လိပျပွာတှေ သနျ့ခဲ့ပါတယျ ။
သိပျခဈြပါတယျဆိုတဲ့ လူနှဈယောကျကွားမှာ နောကျလူတဈယောကျပျေါလာတဲ့အခါ တကယျခဈြတဲ့သူကပဲ တဈယောကျတညျးကနျြခဲ့ရပါတာ မြားပါတယျ ဒါကတော့ ကြှနျမ ​ပွောပွခငျြတဲ့ သုံးပှငျ့ဆိုငျ ဇာတျလမျးပေါ့ ။ ဒီမှာပဲ တဈခနျးရပျပါတယျ ။
သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်း ….
သူ့ကို ကျွန်မ သိပ်ချစ်ခဲ့သလို ကျွန်မကိုလဲ သူကျွန်မနဲ့ထပ်တူ ချစ်နေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ် ။ ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့အစက သိပ်ကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းခဲ့သလို အရမ်းလဲ ပျော်ခဲ့ရပါတယ် ။ သူနဲ့ကျွန်မ နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိ အတူတူဆိုတဲ့ ကတိတွေဟာ သိပ်ကို ချိုမြိန်ခဲ့ဖူးတာ ။
ချစ်ခဲ့ကြလို့မှ အချိန်တွေ မကြာသေးခင်မှာပဲ အချိုးတွေ ပြောင်းလာခဲ့တယ် ။ အချိန်မှန်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ဖုန်းတွေဟာ … အချိန်လွန်သွားတဲ့အထိ ကိုယ့်ဆီ ၀င်မလာခဲ့ဘူး ။ မီးစိမ်းတိုင်း ကိုယ့်အတွက် အမြဲဖြစ်တတ်ခဲ့သူဟာ … Active Now ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ဆီ စာတစ်ကြောင်းမှ ရောက်မလာခဲ့ဘူး ။ ကိုယ်တွေးနေသလို မဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့သာ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ နှစ်သိမ့်ခဲ့တာပါ ။
ဒါပေမယ့် … နောက်တစ်ယောက်တဲ့ ကျွန်မအပြင် သူချစ်ရတဲ့သူ နောက်တစ်ယောက်ပေါ့ … ဒီအကြောင်းတွေ သေသေချာချာသိခဲ့ရတဲ့ ညမှာတော့ ကျွန်မ သည်းသည်းထန်ထန်ရွာနေတဲ့ မိုးတွေနဲ့အပြိုင် ကျွန်မ ငိုခဲ့ရတယ် ။ ဒီမျက်ရည်တွေက ဒီလောက်ပါပဲ ဒီထက်ပိုပြီး မငိုဖြစ်တော့ဘူး ။
ကျွန်မ ရိုးတယ်ဆိုတာထက် တော်တော်လေးကို အခဲ့တာပါ ။ ချစ်တယ်ဆိုရုံလေး ချစ်တတ်ခဲ့တာ သူ့ရဲ့ နောက်လူလို ချိုအီနေတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ မာယာတွေ မသုံးတတ်ခဲ့ဘူး ။ သူကလဲ ကိုယ့်ကို ချစ်တယ် ကိုယ်ကလဲ သူ့ကို ချစ်တယ်ဆိုရုံနဲ့ ကျေနပ်ခဲ့မိတာလေ ။
ဒီဇာတ်လမ်း … တစ်ခန်းတွေ မရပ်ခင် ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပဲ နေရစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မဟာ ချန်ထားရစ်ခံမယ့် မိန်းမတစ်ယောက်တော့ မဖြစ်ချင်ဘူးလေ။ ချစ်ခဲ့တုန်းက ဖြူစင်ခဲ့သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချန်လှပ်လိုက်တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကျွန်မ အနည်းဆုံးတော့ လိပ်ပြာတွေ သန့်ခဲ့ပါတယ် ။
သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကြားမှာ နောက်လူတစ်ယောက်ပေါ်လာတဲ့အခါ တကယ်ချစ်တဲ့သူကပဲ တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့ရပါတာ များပါတယ် ဒါကတော့ ကျွန်မ ​ပြောပြချင်တဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းပေါ့ ။ ဒီမှာပဲ တစ်ခန်းရပ်ပါတယ် ။